Keewwatawwan filataman irra lakkaawwii ida'a yk haqa. Dhangii lakkaawwii qindeessuuf, Dhangeesi - Raasaasaawwan fi Lakkaawwii filadhu. Kabala Raasaasaawwan fi Lakkaawwii mul'isuuf, Mul'isi - Kamshaawwan - Raasaasaawwan fi Lakkaawwii
Yoo gargarsii CTLdhaangeefamaa tahe, sajoowwan dabalataa lamatu mul'ata.
Barruun kan galee bitaa irraa gara mirgaatti.
Barruun, barruu xaxaa afaan tooriitiin dhangeefame miragaa irraa gara bitaatti gala.